रानी ऐश्वर्य कति राम्री ! « रिपोर्टर्स नेपाल
रानी ऐश्वर्य कति राम्री !
प्रकाशित मिति : ६ असार २०७८, आईतबार
ह्यान्डसम राजा, सुन्दरी रानी ! दिवंगत राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्यका प्रसंगमा यस्ता अनेक किस्सा सुनिन्छन् । खासमा रानी ऐश्वर्य कति राम्री थिइन् त ?
३० वर्षसम्म नेपालकी रानी भएकी ऐश्वर्य बिछट्ट सुन्दरी थिइन् । नारीजन्य शास्त्रीय सुन्दरता विशेष थियो उनमा । उनको रुप, लावण्य मात्र नभएर हेयर स्टाइल, चस्मा र परिधानको निकै चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो । चित्रकारहरुले उनको स्केच बनाउँदा आँखा, ओठ र परेली विशेष रुचाउँथे ।
महर्षि वात्सायनले ‘कामसूत्र’ को यौनसंहितामा चर्चा गरेका नारीका गुण र बनोट अनुसार उनी पद्मिनीजस्तो लाग्थिन् । पद्मिनी शरीर न धेरै अग्लो न त धेरै होचो अर्थात् ठिक्कको हुन्छ । आँखा हरिणका जस्ता हुन्छन् । अनुहार पूर्णिमाको जस्तो चम्किलो हुन्छ । केशराशि कालो र चिल्लो हुन्छ ।
२०२२ सालमा वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको मागी विवाह भएको थियो । रोचक त के भने ऐश्वर्यका दुई बहिनी कोमल र प्रेक्षाको विवाह पनि राजा वीरेन्द्रका दुई भाइ ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रसँग भएको थियो । यस्तो संयोग इतिहासमा विरलै हुने गर्छ ।
जनरल केन्द्रशमशेर जबरा र राज्यलक्ष्मीदेवी राणाकी जेठी छोरी ऐश्वर्य सन् १९४९ नोभेम्बर ७ मा लाजिम्पाट दरबारमा जन्मेकी थिइन् । उनले स्कुले शिक्षा सेन्ट हेलेन कन्भेन्ट स्कुल खर्साङ र सेन्ट मेरिज स्कुल जावलाखेलमा लिएकी थिइन् भने पद्मकन्या कलेजबाट मानविकीतर्फ १९६७ मा स्नातकोपाधि लिएकी थिइन् ।
उनको सौन्दर्यबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङ पनि प्रभावित भएका रहेछन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको निम्तोमा २०३० मा चीन भ्रमणमा गएका बेला माओले राजा वीरेन्द्रसँग भेट्न खोजेछन् ।
माओले ‘जो कोहीलाई नभेट्ने, भेटे पनि छोटो मात्र भेट्ने अनि प्रायः महिलासँग नभेट्ने’ थाहा पाएकाले राजा वीरेन्द्र एक्लै गएछन् । माओले हँसिलो पारामा जिज्ञासा राखेछन्, ‘खोइ त बडामहारानी ? किन एक्लै ?’ राजा अक्क न बक्क परेछन् र तुरुन्त रानी ऐश्वर्यलाई बोलाउन पठाएछन् । रानीसँग भेटेपछि माओ सन्तुष्ट भएछन् ।
पूर्णचन्द्रजस्तै उज्याली ऐश्वर्यको साहित्यिक नाम थियो, चाँदनी शाह । त्यस नामका उनका अनेक गीत तथा कविता प्रकाशित छन् । उनका केही प्रेम प्रसंगका गीत गाएकाले गायक नारायण गोपालसँग उनको विशेष सम्बन्ध थियो भन्ने हल्ला पनि नचलेको होइन । तर नारायण गोपालका मित्र एवं गीतकार विश्वम्भर प्याकुरेलले त्यसलाई ठाडै नकारेका छन् ।
उनी समाजसेवामा पनि सहभागी थिइन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्ष एवं सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्ष समेत थिइन् । बीबीसीडटकोडट युकेले सन् २००१ म उनको बारेमा समाचार दिएको थियो, ‘ऐश्वर्यः नेपाल्स फोर्सफुल क्विन’ । दरबार होस् कि सरकार, उनकै खटनपटन चल्थ्यो भन्नेहरु थुप्रै छन् ।
रानी ऐश्वर्य सुन्दरी मात्र थिइनन्, हठी पनि थिइनन् । उनका अगाडि कसैले मत बझाउन सक्दैनथ्यो । उनले बोलेपछि बोलिन्, बोलिन् । उनी आफूलाई ‘ए क्लास’को राणाकी छोरी ठान्थिन् । जुद्धशमशेरकी खलककी उनले चन्द्रशमशेर खलक (‘सी’ क्लास) की देवयानी राणालाई बुहारी स्वीकार्न नमान्दा २०५८ जेठ १९ गते युवराज दीपेन्द्रले नारायणहिटी राजदरबारमा उनीमात्र होइन, राजपरिवारका १० सदस्यको गोली हानी हत्या गरेको भन्नेहरुको कमी छैन ।
सन् १९९५ मा पेप्सीकोला ब्रान्ड एम्बेसडर भई विश्व सुन्दरी ऐश्वर्य राय नेपाल आउँदा रानी ऐश्वर्यले पूर्वमिस नेपाल रुबी राणालाई दर्शन भेट कार्यक्रम बनेको रहेछ । तर अन्त्यमा ‘क्यान्सिल’ गरेकाले नदिएकाले रानीको साक्षात् दर्शन नपाएको तीतो पोखेकी थिइन्, रुबीले केही वर्ष पहिले सामाजिक सञ्जालमा । ‘के म वीरगन्ज छपकैया गाउँको क्याप्टेन जनकबहादुर राणाकी छोरी भएकाले रानी तर्सिएकी त होइनन् ?’
उनले विश्वसुन्दरीसँगै रानीको भुक्क फुलेको केशसज्जा हेर्न, काँधमा सिफनको साडीको सप्कोको बुट्टा नियाल्न अनि कोमल कोपिलाजस्तो हातमा काँचका चुरा खन्केको आवाज सुन्न नपाएको भन्दै पीडा पोखेकी थिइन् ।
विश्व सुन्दरी ऐश्वर्य रायले नारायणहिटी दरबारमा दर्शन भेट पाएपछि रुबीसँग रानी ऐश्वर्यको बारेमा खुब तारिफ गरेकी थिइन् । रुबीले एकोहोरो सुनिमात्र रहिन् । केही नबोलेपछि ऐश्वर्य रायले सोधिन्, ‘आर यु आके, रुबी ?’